Maitiro Ekuita Izvo Zvizhinji zveDesktop Yako kune Nhare Kufambisa | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 11, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Mukumhanya kunombundira nhare, zviri nyore kuti mabhizinesi aregeredze mawebhusaiti saiti, asi shanduko zhinji dzichiri kuitika nenzira iyi, saka hazvikurudzirwe kuregeredza desktop yako saiti zvachose. Mamiriro ezvinhu akanakisa kuve nenzvimbo dzezvikwata zvakawanda mushure meizvozvo, inyaya yekutora danho kana iwe uchida saiti yakazvimiririra saiti, saiti inopindura iyo inoteedzera iyo desktop dhizaini kune nhare, basa rinotarisana nebasa, kana mhinduro yemasanganiswa.
Statistics paKushandisa Kwenhare Enderera kuSkyrocket
71% yehuwandu maminetsi edhijitari anoshandiswa online muUnited States vanobva kunhare. Iyo inokwira kusvika ku75% muMexico uye inokwira 91% muIndonesia. IUK inofamba zvishoma kumashure pa61%.
MuUS, vakuru vanoshandisa avhareji ye Maawa 87 pamwedzi online pane smartphone uchienzaniswa nedesktop.
Vanoda kusvika 70% yevakuru veAmerica shandisa zvese desktop uye nharembozha, Ine desktop-chete uye nharembozha-yega mushandisi manhamba ese ari maviri anotenderera achitenderera 15% mucherechedzo.
Izvo zvakakosha kuti uzive neaya manhamba kuti hazvisi zvese zvinoshanduka kubva kudesktop kuenda kune nhare… maitiro mazhinji evashandisi vedu ari kuchinjira kudesktop NE mobile. Semuenzaniso, ini ndinowanzotenga zvigadzirwa pamhepo ndichishandisa nharembozha yangu pandinoona terevhizheni. Asi ini handinyatso kutenga kusvika ini ndigone kuona chigadzirwa pane desktop yangu kwandinogona kuona zvimwe zvakawanda mumifananidzo yemichero, nezvimwe.
Izvo zvinopesana ndezvechokwadi futi. Nguva zhinji vanhu vari kubasa vanowana chinyorwa kana chigadzirwa pamhepo, wozovachengeta pane yavo nharembozha kuti vaone gare gare. Ipo nhare ichiva kuenda kuenda, hazvisi zvinogara zvichisarudzika.
Sekufambisa kwefoni, padyo nemunda kutaurirana, uye geolocation inova zvishandiso zvekubata zvine hungwaru pamaapplication efoni, ndinozviwana ndiri kushandisa maapplication zvakanyanya uye zvakanyanya futi. Mumwe muenzaniso isupamaketi yemuno, Kroger. Yake mbozhanhare Anwendung ipapo anondinyevera pandinopinda pamusuwo kune yangu yemuno Kroger uye zvinondiyeuchidza kuti ndivhure iyo app uye nditsvage specials. Kwete izvozvo chete, zvigadzirwa zvavo zvinondiudzawo kuti ndeapi maisisi andinogona kuwana zvigadzirwa mairi. Izvo zvinongedzo uye nguva zvakavakirwa mumapurogiramu, asi kwete nguva dzose zvine mutsindo kuburikidza neye mobile web browser.
Iyi infographic kubva ERS, inochengetedzwa IT inotsigira masevhisi timu, inokurukura dzakasiyana siyana sarudzo dzekutarisa kana uchifambisa desktop yako webhusaiti uye uchigadzirisa iyo kune nhare Iyo zvakare inokurukura kana bhizinesi richishuvira kunongedza nharembozha ine rakaparadzaniswa zvachose webhusaiti webhusaiti, webhusaiti iyo inoteerera kune chero nhare kana desktop, nharembozha application, kana imwe hybrid mhinduro yeumwe neumwe. GoDaddy, semuenzaniso, ine hombe nhare mbozha inonzi maInvestors inoita kuti zvive nyore kune vanhu vanofarira madomaini kuti vawane uye vatenge… icho chigadzirwa niche asi zviri nyore kupfuura webhusaiti kushandisa.
Tags: mazano ekugadziradesktop nhare yekufambisaerschemasanganiswa mobile mhinduroinfographicMobile Anwendungnharembozha applicationnhare dzekugadzira matipimobile statsnhare kuenda kudesktop kutamanharembozha webhusaitiwebhusaiti yewebhu